Salon de la gastronomie: haneho ny hakanton’ny sakafo malagasy | NewsMada
Salon de la gastronomie: haneho ny hakanton’ny sakafo malagasy
Hotanterahina etsy amin’ny Alliance française Andavamamba ny « Salon de la gastronomie » ny 27 ka hatramin’ny 29 septambra izao. Homen-danja manokana ny vokatra eto an-toerana sy ny vokatra malagasy amin’ireo akora ampiasaina. Eo koa ireo mpahay sakafo malagasy haneho ny talentany amin’izany.
Andiany fahenina ny hetsika, manodidina ny 50 ny tranoheva ary mahakasika ny sakafo sy ny tolotra manodidina izany ny ho hita ao. Ambohipihaonan’ny mpanao sakafo sy ny mpankafy mihinan-kanina, araka izany, io telo andro io. Hahahenoana karazan-tsiro samihafa sy hanitra sakafo maro amin’izany. Hisy ny fanentanana sy kilalao ho an’ireo ankizy tonga ao amin’ny AFT amin’ireo fotoana ireo.
Ankoatra ny sakafo, hisy fampirantiana ireo karazam-bokatra toy ny vokatra azo avy amin’ny ronono, ny hazandranomasina, ny legioma, ny sôkôla…
Hahazo tombony ireo mpitsidika rehetra satria hisy ny fampianarana tsotsotra mikasika ireo karazan-tsakafo iarahana amin’ireo efa tena matihanina amin’izany. Eo koa ny fiaraha-miasakafo ho an’ny rehetra. Ankoatra izany ny fianarana manaingo latabatra hahatsara endrika sy haha te ho tia ny vahiny rehefa misy fanasana na ho an’ny isan-tokantrano mihitsy. Manana ny toerany koa ireo mpanao sakafo an-dalambe ka hampianatra ny fanamboarana mofo akondro i Selesy izay efa malaza amin’izany taranja izany.